Hulusi သူဟာအာကာ Boulevard လမ်းသွားလမ်းလာများနှင့်စက်ဘီး Path ကိုဆွဲဆောင်မှုများ - rayhab ဖြစ်ပါသည်
Homeတူရကီဗဟို Anatolia ဒေသကြီး38 KayseriHulusi သူဟာအာကာ Boulevard လမ်းသွားလမ်းလာများနှင့်စက်ဘီး Path ကိုပြုရမည်
10 / 09 / 2019 Levent Elmastaş 38 Kayseri, ဗဟို Anatolia ဒေသကြီး, အထွေထွေ, လမ်းမကြီး, တူရကီ 0
hulusi bulvari လူသွားလူနှင့်စက်ဘီးလမ်းကြောင်းကိုပြုမိပါလိမ့်မည်စီးဆင်း
Kayseri တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်ခြင်းဖြင့် လုပ်. လုပ်ဖို့ Kayseri ဗိုလ်ချုပ်ကြီး Hulusi သူဟာအာကာ Boulevard လူသွားလူနှင့်စက်ဘီးလမ်းကြောင်း၏အရေးအပါဆုံးနညျးလမျးတစျခုဖွစျနပွေီသော နေ့မှစ. ဖွင့်လှစ်။
Kayseri တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်ခြင်းဖြင့် လုပ်. လုပ်ဖို့ Kayseri ဗိုလ်ချုပ်ကြီး Hulusi သူဟာအာကာ Boulevard လူသွားလူနှင့်စက်ဘီးလမ်းကြောင်း၏အရေးအပါဆုံးနညျးလမျးတစျခုဖွစျနပွေီသော နေ့မှစ. ဖွင့်လှစ်။ ခြောက်လကုမ္ပဏီများခြေလျင်နှင့်ဆိုင်ကယ်လမ်းကြောင်းအပေါ်ပြုရမည်အမှုတင်ဒါဝင်ရောက်ခဲ့သည်ထွက်သယ်ဆောင်။
ဗိုလ်ချုပ်ကြီး Hulusi သူဟာအာကာရိပ်သာလမ်း3သန်းလူသွားလူနှင့်ဆိုင်ကယ်လမ်းကြောင်း 600 တထောင်လုပ်ဖို့ကုန်ကျစရိတ်အကြောင်းကိုတင်ဒါခဲ့ကြသည်။
Basaran ဆောက်လုပ်ရေး:2242 တထောင်သန်း
အဆိုပါစီမံကိန်းကိုအဆိုပြု:2444 တထောင်သန်း
re-ဖွဲ့စည်းပုံ:2585 တထောင်သန်း
Aydin ဆောက်လုပ်ရေး (မင်္ဂလာLöksof): အဆိုပါ2699 တထောင်သန်း
ABC ရုပ်သံသံမဏိဆောက်လုပ်ရေး-အဆောက်အအုံမိတ်ဖက်:2783 တထောင်သန်း
Eco ဒီဇိုင်း:3151 တထောင်သန်း
လုပ်ဖို့လမ်းဆုံ Boulevard မှ Hulusi သူဟာအာကာတံတား 07 / 05 / 2019 ဗိုလ်ချုပ်ကြီး Hulusi သူဟာအာကာအားဖြင့် Kayseri တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်လမ်းဆုံ Boulevard-Aşiyanလမ်းတံတားမှလုပ်ရမည်။ ဘာသာရပ်များကိုးကုမ္ပဏီများအတွက်ကျင်းပနုပါဝင်ခဲ့။ မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးတံတားတင်ဒါမှသန်းတထောင်4600 အကြောင်းကိုဆုလာဘ်ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ Hulusi သူဟာအာကာ Boulevard-Aşiyanလမ်းတံတားများအတွက်တင်ဒါထွက်သယ်ဆောင်ကိုးပါဝင်ကုမ္ပဏီများမှလမ်းဆုံကမ်းလှမ်းမှုတစ်ခုလုပ်ရမည်ဖြစ်ခဲ့သည်။ Sinan ဆောက်လုပ်ရေး:3သန်း 082 တထောင် Sung ဆောက်လုပ်ရေး:3သန်း 380 တထောင် 400 £ခေတ်တင်ခဲ့သည်: SONTEK ဆောက်လုပ်ရေးနှုန်း3သန်း 657 တထောင် 950: မိဘများ Aydin နှုန်း3သန်း 777 တထောင် 700 အောက်ပါအတိုင်းကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏နုကုမ္ပဏီများနှင့်လေလံတွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်3သန်း 778 ...
Hulusi သူဟာအာကာ Boulevard Continues လေ့လာစရာများ 30 / 07 / 2018 Kayseri တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်, လမ်းပေါ်မှာ၏ယခင်အမည်ဖြင့်သင်အရည် Boulevard အတွက်လမ်းချဲ့ထွင်မှုအပေါ်အဆောက်အအုံ Tavlu Hulusi ဆက်လက်ဖြိုဖျက်။ Kayseri တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်, လမ်းပေါ်မှာ၏ယခင်အမည်ဖြင့်သင်အရည် Boulevard အတွက်လမ်းချဲ့ထွင်မှုအပေါ်အဆောက်အအုံ Tavlu Hulusi ဆက်လက်ဖြိုဖျက်။ အဆိုပါချောမွေ့စွာအဆိုပါနိုင်ငံသားများ၏သဘောတူခွင့်ပြုချက်အဖြစ်ဖြိုဖျက်အလုပ်လမ်းဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်အတွက်ချောမွေ့စွာဆက်လက်ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ မြို့တော်ဝန် Mustafa Celik သွား၏လုပျငနျးနီးကပ်စွာနောက်တော်သို့လိုက်ခဲ့သည်။ မြို့တော်ဝန် Mustafa Celik, လယ်ပြင်၌ရှိသောထိုအချိန်ကာလ၏စစ်ဆင်ရေးနှင့်ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းကိုပြုမိနီးကပ်စွာအတိုင်းလိုက်နာရန်နှင့်မကြာခဏသွားရောက်ကြည့်ရှုအားဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်။ ဥက္ကဋ္ဌသံမဏိ, ...
က Round Completed ဒုတိယအအဆင့် Direction အဖွဲ့မှာ Hulusi သူဟာအာကာရိပ်သာလမ်း 03 / 09 / 2018 မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကြီးမားတဲ့အတိုင်းအတာ Kayseri အသွားအလာမှကယ်ဆယ်ရေးဆောင်ခဲ့ဦးမည်ကြောင်း Boulevard ၏ဆောက်လုပ်ရေးဆက်လက်ဖြစ်ပါတယ်။ စီမံကိန်းများထဲမှခရီးသွား၏ညှနျကွားအလွန်အရေးပါမှုကိုအလေးထားမှာမြို့တော်ဝန် Mustafa Hulusi သံမဏိ, အ mite Boulevard ၏ဒုတိယအဆင့်တွင်ပြီးစီးခဲ့ပြီ။ အလုပ်သငျသညျရှေးရိပ်သာလမ်း Tavlu ဦးတည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ပွေးနေဆဲဖြစ်သည်။ မြို့တော်ဝန် Mustafa Celik, £ 68 သန်း၏ expropriation စျေးနှုန်း၏တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းကြောင်းကြေညာခဲ့သည်။ Hulusi Street're Tavlu ယခင်ကသူတို့ကအရည် Boulevard ၏ဒုတိယအဆင့်တခုတခုအပေါ်မှာထူးချွန်အလုပ်လုပ်ဆောင်ကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်သူကိုမြို့တော်ဝန် Mustafa Celik ။ သမ္မတ, အမြင်အာရုံရှင်းလင်း Mustafa Celik နှင့်အတူအလုပ်အကြောင်းသတင်းအချက်အလက်ကိုပေး၏မီ ...
လေလံတင်ရောင်းချ Hulusi သူဟာအာကာ Boulevard စက်ဘီးလမ်းကြောင်းကို
Hulusi သူဟာအာကာ Boulevard လူကူးခြင်းနှင့်စက်ဘီး Path ကိုမှ
လုပ်ဖို့လမ်းဆုံ Boulevard မှ Hulusi သူဟာအာကာတံတား
Hulusi သူဟာအာကာ Boulevard Continues လေ့လာစရာများ
က Round Completed ဒုတိယအအဆင့် Direction အဖွဲ့မှာ Hulusi သူဟာအာကာရိပ်သာလမ်း
သွင်း: Izmit လမ်းရထားသည့်အခါလုပ်ခံရဖို့ရွှေ့မည်
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: လမ်းသွားလမ်းလာမြေပေါ်Yaptırılacaktır (ပေါ်တွင် LRT လမ်းကြောင်းအတွက် Vatan Boulevard)